Izindlu e- Santa Rita-Balneario Reta - I-Airbnb
Izindlu e- Santa Rita-Balneario Reta
Balneario Reta, Buenos Aires, i-Argentina
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Patricia
Inkimbinkimbi yamakhabethe amabhlokhi angu-3 ukusuka ogwini nangu-6 ukusuka enkabeni, ahlotshiswe ngobulula obufudumele, obungena ezweni elincane kanye nedolobha lasebhishi lapho atholakala khona. I-Microwave, Isiqandisi, Ithangi Lamanzi Ashisayo, iDirectv, Abalandeli egumbini ngalinye. Indlu ngayinye ine-carport ekhethiwe kanye ne-grill ngaphansi kwezihlahla. Izindawo zangaphandle ezibanzi zinikeza ubumfihlo.
Amakhabethe abanzi, anokukhanya okuhle kwemvelo. Indawo inamapulangwe, lapho izinyoni zomdabu zanda khona (ngisho nesidleke). Phakathi nobusuku, amafasitela angavuleka, anamanetha omiyane, futhi umsindo wolwandle, amakhilikithi namaxoxo uvame ukujatshulelwa.
I-Reta iyidolobha elithulile, elinezimoto ezincane kakhulu, imigwaqo esontekile, nemikhuba yasemaphandleni. Amabhishi ayo abanzi, futhi asendle. Uma uhamba ngasogwini lolwandle cishe ikhilomitha elingu-1 ukuya empumalanga, umfudlana uyathulula, wakhe ichibi lasolwandle, lapho kuhlala khona ama-flamingo, kanye nazo zonke izinhlobo zezinyoni ezifudukayo. Kufanelekile ukuvakashelwa ekuseni kakhulu, futhi ekushoneni kwelanga.
Egameni lami nginkontileka ye-ejensi yezindlu ukuze ibe nosizo uma iludinga, idatha itholakala kukhabethe.
Ngena: 11:00 - 20:00